E nwere ebe n'ụwa a nke a na-akpọ "Dubai"
Dubai - Ihe niile dị ukwuu na obere
Ọ nwere otu ebe n'ụwa nke a na-akpọ “Dubai”. “DUBAI” bụ ebe izu ike uche gị jupụtara ebe niile. Ọ bụwo ụzọ nke akụkọ na-aga nke ọma nye ọtụtụ ndị chọrọ inweta ma mezuo ebumnuche ha ọrụ. United Arab Emirates, Ọ abụrụla ụwa dị iche maka ndị njem mara mma gburugburu ụwa. Ohaneze na-ekwu, onye mgbe na-eleta njem a dị egwu mezie uche na aru na nkpuru obi ha. Kemgbe 15 dị ịtụnanya ka m bụrụ akụkụ nke ụwa a. Kwa ubochi niile mere eme n'ebube. Oge ọ bụla Dubai kpughere ihe mara mma nke na -eme ka oge gboo nye ndị ọbịa na ndị nleta.
Akaebe nkem na Dubai. Abịara m dịka ọbịbịa n'obodo a ma enwere m mmetụta nke akụkụ ya. O nyere m ezinaụlọ m na ncheta dị m mma ka m were ya kpọrọ ma nata nnabata na nkwado na-enweghị atụ. Emere m ka m na-enwu n'ọtụtụ ụzọ ma mee ka m nwee olileanya ụbọchị m nọ n'ọchịchịrị. Onye ndu nke obodo a bu ochicho onye n’enwe obi uto, raara onwe ya nye, nwegasiri uche ma nwee obi nlebara anya. Ọ bụ ntuzi aka ya na ọhụụ ya nke mere ka ala Dubai bụrụ Wonderland. Ọ bụ onye nlereanya, onye, ​​M na-ele anya.
Ile ọbịa, ikpo ọkụ ma nye onye ọbịa ọ bụla ihe omimi dị omimi ahụmịhe bụ nkwa nke Dubai. Ọzọkwa, ndị ọbịa na-eleta ebe a nwere ajụjụ na ihe nzuzo ga-ejaghachi ihu ọchị mgbe niile na ihu ha. Ka m mee ka ị chee Dubai ka anyị bido.
Ngwurugwu na-acha ọcha nke Burj Al Arab na-etolite n'abalị. Dika ihe nlere na ihe ngosi a gosiputara n’elu uzo ya n’egwu egwu. Ebe E Si Nweta: Burj Al Arab Facebook.
Burj Al Arab-Iconic Hotel nke di n'okporo ụzọ Jumeirah nke na-elepụ anya na Arab Arab. Emirates bụ ebe ịnọ jụụ na debe onwe gị pụọ ná nchekasị na nchegbu. Ọzọkwa nke ụwa okomoko na ọbiụ ụlọ oriri na ọ makesụ ofụ nke ụlọ oriri na ọ makesụ fallụ na-eme ka ị hụkwuo n'anya maka ọrụ onwe onye na ambience ọ na-enye ndị ọbịa. Jumeirah Madinat Jumeirah- O buru na ichoro inwe obi oma dika onye isi ma obu ada gi ebe agaghi enwe ebe ozo ma obu ikekwe m ga akpo ya dika ya.
Royallọ ndị Royal na ọnọdụ ụlọ oriri na ọ areụ areụ dị otú ahụ onye ọbịa ahụ bịara ebe a ga-ahụrịrị ọchịchị. Ọ bụrụ n’edetu aha ụlọ oriri na ọ theụ luxuryụ niile dị ọnụ ala ma na-ekwu maka ha ọ ga-adị ọtụtụ ma ee, aga m akpọ aha ole na ole nke mere mụ na ndị ọbịa m iche na iche na kwa nyere mmetụta zuru oke oge ọ bụla Elewo m ha Jumeirah Zabeel Saray, Atlantis the Palm, Fairmont Dubai, Armani di na Burj Khalifa wdg.
Ndi obia nwere nkpuru uto di uto nwere ike iri ihe nile di nri. n'ụlọ nri dị iche iche na Dubai. Onye ọbịa nwere ike iriju afọ ma reụrịa ọ foodụ maka nri na-atọ ụtọ iji mechie afọ ha.
Dubai, United Arab Emirates dị ukwuu!
Enwere m aka onwe m ọtụtụ ụlọ oriri na ọ restaurantsụ .ụ mana ịkọ aha ole na ole nyerela m aka echefu n’obi m bụ Pierchic dị na Pier n’ịche oke osimiri mara mma na-eme ka ị nwee nri gị ebe ikuku dị jụụ na-ejide ntutu gị, Amla Restaurant dị na Jumeirah Zabeel Saray na-enye ezigbo mmetụta nke ọdịbendị na ụtọ India, Malọ oriri na ọ Restauranụ Alụ Al Mahara Seafood - Emi odude ke Burj Al Arab ị nwere ike ịnụ ụtọ ihe ụtọ mgbe ị na-ele ịma mma nke ihe ndị e kere eke dị n'oké osimiri.
E nwere ọtụtụ ebe mara mma na-enyochagharị mana ụlọ oriri ọ bụla nwere nri mbinye aka nke ya, ikuku, usoro ọrụ na ịma mma iji hụ n'anya nke na-enye onye ọbịa ahụ ọbịa. Ahụmahụ WOW ma gbakwunye n'okporo ụzọ ncheta ha.
Dubai Spa na ahụike ọdịmma
Ndi kwenyere na ibi ndu na ihunanya imebi ihe ha nwere n’ime ha nwere ike gbaba mfe nke Spa. Ọzọkwa, ọdịmma emmepe dị na Dubai ga-akpọ ole na ole The Moksha Spa, Talise Spa, yana, Armani Spa wdg. Nhọrọ nke ọgwụgwọ pụrụ iche dịnụ enyere ndi obia dika obi ha si di. Mgbe ọgwụgwọ ha gbasasịrị n'ezie onye ọbịa ahụ nwere obi ụtọ na mkpụrụ obi ha na-enyefe onwe ha kpamkpam maka udo nke ime.
Iesmụ nwanyị na ụmụ nwanyị riri ahụ maka ịzụ ahịa agaghị enwe afọ ojuju n'ihi na ha nwere ike ịchọta ihe niile ha chọrọ Na mbara ala ebe a na Dubai. Dịka ọmụmaatụ, uwe eji mara, ngwa ndị na-adọrọ adọrọ, ndị na-achọ ụlọ, nri dị mma, ihe ndị na-eri nri maka ndị na-ahụ maka ogige. Ụmụ nwoke ji n'aka na a ga-esoro n’elu ngwa ngwa eletrọniki dị iche iche dị na nnukwu ụlọ ahịa na-atọ ụtọ na Car ebe a na-egwu egwuregwu egwuregwu ụgbọ ala kacha mma ga-akpụrụ ha nzuzu.
Ihe ị ga-eme na Dubai na ụmụaka
&Mụaka & ndị ọbịa ndị hụrụ ihe ụtọ, njem na nlegharị anya Dubai nwere ọtụtụ ebe nkiri ị gara ma nwee ebe dị iche iche dịka Dubai theme park, Desert Safari, Dubai Creek, Dubai Museum na Jumeirah Mosque, The Glow Garden na ọtụtụ ndị ọzọ ị ga-aga.
Umuaka biara ebe a gha enwetara obi mmetuta ha na Alice na Wonderland ọ ga-eju anya n'ihi ọtụtụ njem dị n'ọtụtụ ebe dị ka obodo na-atọ ụtọ, Aquarium Dolphin, Kidzenia, Planet Ime Anwansi, Legoland, IMG World, waterparks aqua, Ogige Wadi Water na-aga n'ezie ijide ha na ijuanya. dịka ha na-eleta ebe dị iche iche ga-eme ka ha nwee mmetụta ịnọ ebe ahụ ebighi ebi.
Dubai bụ maka ndị niile bịara chọọ ohere ọrụ!
Dubai abụrụla ụlọ ahịa azụmahịa kachasị mma maka ọtụtụ ndị na-azụ ọzụzụ, onye nduzi na onye nduzi maka ndị niile bịara ịchọta ohere. Enwere otutu akụkọ banyere rags iji nwee akụnụba, ọ bụ onye dike bụ onye hụrụ ihe ịga nke ọma ha wee mezuo nrọ ha ebumnuche n’ime ala a.
Ubuo a gbatiri nye ndị bịara ọhụrụ na ndị na-achọ ihe ịma aka gbanyere mkpọrọgwụ ọtụtụ site na imeziwanye ihe ọmụma ha na ime ka ha na-enwu dị ka kpakpando.
Nke ikpe azu, obughi ihe nile m nwere ikwu bụ Dubai bụ ebe anwansị nke mara mma ya, ọdịnala ya na ahụmịhe ya na enweghị egwu. Dubai na-amị ma na-abawanye n'akụkụ niile ya mere onye ọbịa ọ bụla ugboro ugboro mgbe ọ gara ọzọ nwere ihe dị iche na ahụmịhe. Dubai bụ ebe iji cheta ncheta echefu echefu n’oge ọ bụla. Na Na Na Dubai. Ka m jiri uri mechie ya.
Maka Dubai m hụrụ n'anya, Poem
E nwere ebe n'ụwa a
Nke a na-akpọ "Dubai" ụwa nrọ
Ọnwụ, na-atọ ụtọ, na-enweghị uche
Ana m agwa gị na ọ bụ ụwa kachasị mma
Ụmụaka, Ezinụlọ, Di na Nwunye na Ndị okenye nọ ebe a
Onye ọ bụla nwere ike ile ọbịa na nlekọta
Dubai na-agbasi mbọ ike na-eme ka nrọ na ichetụ n'echiche dị ndụ.
Ọ Dị Mfe, Dị Mkpa na Ukwu
Mma na ngọzi ga-esi n'eluigwe daa n'elu ala a.
Citylọ ọrụ Dubai City, na-ekwukarị, ugbu a na-enye ezigbo ọrụ ohere. Ọzọkwa, anyị na-enye nduzi maka Ọrụ na Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka nke anyị Ndị njem Dubai. Yabụ, na-eburu nke a n'uche, ị nwere ike ịnweta nduzi ugbu a, Atụmatụ na ọrụ na United Arab Emirates ya na asusu gi.